fekitori inogadzira yakajeka Flame inodzora chirauro uye chiuno chiuno
haka uye loop tepi murazvo kuramba: zvinoenderana neFAR 25.853 (a)
hokore uye loop tepi ruvara: uchitevera pantone kadhi kana tsika
chiredzo uye chiuno chiuno: 100% nylon
chiredzo uye chiuno chiuno: shandisa kune zvigadzirwa zvekubhururuka
1) Isu tiri nyanzvi yekugadzira zvigadzirwa zvewebhu kwemakore gumi nematatu.
2) Tinogona kupa chero saizi uye chimiro seanodiwa nevatengi.
3) Zvese zvigadzirwa zvedu zvinogona kusangana neEuropean uye Eco-inoshamwaridzika Standard.
4) Isu tinodada neyekutanga mhando neinoshamisa sevhisi uye yemakwikwi mutengo
Flame retardant Hook uye Loop, Flame retardant Hook uye Loop zvinoenderana neyakajairwa FAR 25.853 (a) uye ISO 15025, inoshanda kune zvigadzirwa zvekubhururuka, sutu yemoto-chiratidzo etc.
Inowanikwa hupamhi (mm): 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100, 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100, 110 zana nemakumi maviri nemakumi mashanu emabhiza e160
Mumuedzo uyu chiratidziro chinoitwa munzvimbo yakatwasuka nechishandiso mukati mekabhini uye chinopisa cheBunsen (31.80mm murazvo) chinoiswa pasi pacho kwenguva yakati wandei (ona pazasi). Mushure meizvozvo, iyo specimen inoonekwa.
Isu tinovimba nekufunga zvine hungwaru, kugara uchisimudzira muzvikamu zvese, kufambira mberi kwetekinoroji uyezve pavashandi vedu vanotora chikamu chaicho mukubudirira kwedu kweYakanakisa China Nylon Flame kuramba Hook uye Loop tepi, Isu tanga tichiedza kuwana kubatana kwakasimba nemoyo wese vatengi, vanowana nyowani nyowani yekukudza nekubwinya nevatengi uye zvine hungwaru vadyidzani.
Yakanakisa mhando Flame kuramba Hook uye Loop mutengo, Kuzadzisa izvo zvinodiwa zvevamwe vatengi kweese rimwe diki rakaringana sevhisi uye yakagadzikana mhando zvigadzirwa. Tinogamuchira noushamwari vatengi kupota pasirese kuti vatishanyire, pamwe nekubatana kwedu kwakawanda, uye pamwe chete kukudziridza misika mitsva, kugadzira ramangwana rakajeka!
Pashure: murazvo unokanganisa haka uye loop tepi / antiflaming hoko uye loop tepi
Zvadaro: 100% nylon isina kuvharwa loop fastener tepi
murazvo retardant chirauro uye loop tepi / antiflaming ...
Flame retardant / anti-moto haka uye loop tepi